LA OGAADAY: Sababta Dhabta Ah Ee Eden Hazard & Vinicius Jr Ayna Hal Mar Garoonka Iskula Soo Galin Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
LA OGAADAY: Sababta Dhabta Ah Ee Eden Hazard & Vinicius Jr Ayna Hal Mar Garoonka Iskula Soo Galin Oo La Ogaaday.
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaan xili ciyaareedkan hal mar garoonka soo wada galin xidigaha kooxdiisa ee Eden Hazard iyo Vinicius Jr waxaana la ogaaday sababta dhabta ah ee ka danbaysay.
Eden Hazard ayaa in badan oo xili ciyaareedkan ah ku soo qaatay dhaawac ama taam ahaansh la’aan laakiin arinta layaabka leh ee soo baxday waa waxa uu Zidane ka aaminsan yahay Eden Hazard iyo Vinicius Jr.
Wargayska Spain ka soo baxa ee AS ayaa shaaciyay sababta dhabta ah ee aanu Zidane ilaa hadda shaxda kooxdiisa ee xili ciyaareedkan hal mar ugu soo wada bilaabin Eden Hazard iyo Vinicius taas oo walwal ku abuuraysa jamaahiirta Los Blancos.
Warkan ayaa lagu shaaciyay in Zidane uu aaminsan yahay in ayna wada shaqayn karin Eden Hazard iyo Vinicius Jr waana sababta ayna labadan xidig ilaa hadda u awoodin in ay hal kulan wada ciyaaraan.
Caadiyan booska ugu fiican ee uu Eden Hazard ka ciyaaraa waa garabka bidix ee weerarka sidoo kale Vinicius Jr ayaa booska bidix ee weerarka ku soo bandhiga tayadiisa ciyaareed ee ugu fiican waana sababta uu Zidane u aaminsan yahay in ayna wada shaqayn karin Hazard iyo Vinicius.
Iyada oo Eden Hazard uu hadda ka soo laabtay dhaawicii uu qaliinka u maray waxa uu Zidane heli doonaa xidigo badan oo weerarka ah iyada oo Karim Benzema, Gareth Bale, Lucas Vazguez ay diyaar hore u ahaayeen isla markaana uu Marco Asensio soo laabanayo.
Waxayna tani sii kordhin kartaa in Vinicius Jr iyo Eden Hazard ayna heli doonin waqti kale oo ayna ku soo wada bilaaban karin shaxda Zidane.
Eden Hazard waxa uu awood u leeyahay in uu ka ciyaari karo weerarka dhexe waxaynai tani dhici lahayd haddii aanu Karim Benzema taam ahayn ama aanu diyaar ahayn taas oo Vinicius Jr siin lahayd in uu booskiisa ka ciyaaro oo ay Hazard garoonka soo wada gali lahaayeen.
Laakiin in Zidane uu aamisan yahay in wada shaqaynta Eden Hazard iyo Vinicius Jr ayna suurtogal ku ahayn shaxdiisa hadda waxay muujinaysaa sababta aanu ilaa hadda hal kulan garoonka iskugu soo galin xili ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, marka dhawaan lagu soo laabto xili ciyaareedka La Liga waxaa la arki doonaa haddii uu Zidane tijaabin doono in Eden Hazard iyo Vinicius Jr ay hal mar shaxdiisa ku soo wada bilaaban karaan ama ugu yaraan ay garoonka isugu soo gali karaan.
Waa sax in uu kabtan zdn owsan halkulan is kula bilaabin labadan xidig hazard iyo vinicioc jr
Weerarka dhexe ha ka ciyaarsiyo eden hazard waa best assists vinicius jr waa best scorer